Global Voices teny Malagasy » Làlan’i Limà Velona Miaraka Amin’ny Feon’ny Mozika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Septambra 2014 8:48 GMT 1	 · Mpanoratra Juan Arellano Nandika Ntsoa
Sokajy: Amerika Latina, Però, Hevitra, Mediam-bahoaka, Mozika, Ny Tetezana - The Bridge
Navoaka voalohany tamin'ny teny Espaniola teo amin'ny bilaoginy Globalizado  ilay lahatsoratr'i Juan Arellano ary voadikan'i Victoria Robertson  ho amin'ny teny Anglisy ho an'ny “Global Voices”.
Tsy vahiny amin'izany toe-javatra izany i Limà, renivohitr'i Però. Roahan'ny mpitandro filaminana anefa indraindray ireo mpanakanto eny an-dàlana  hiàla amin'ireo toeram-pivarotana sy ireo faritra manan-tantara ao an-drenivohitra, misitraka fahalalahana tsara amin'ny fanaovana ny asany ny ankamaroan'ny mpitsoka mozikan'i Limà, ary mba mahazo vola kely. Ekena mihintsy aza izy ireny any amin'ny toeram-pisakafoana maro sy ireo fitanteram-bahoaka ao an-toerana, taxi-be sy kamiao  antsoina ihany koa hoe “micros” na “combis”
Fa mbola fanontaniana iray hafa ny hoe tena ankafizina tokoa ve ny anjara toeran'ny famalifaliana an-dàlambe. Nisy fotoana, namaky lahatsoratra iray [GP1]  momba ilay lohahevitra aho tao amin'ny bilaogin’ i “Limà es Linda ” (Tsara Tarehy i Limà) izay nanosoka hevitra hoe: “Tsy manome lanja ny seho eny an-dàlana ny ‘Limeños‘ satria sokajian'izy ireo ho toy ny endrika hataka fa fandraisana anjara hampivoatra ny fiarahamonina akory ilay izy.” Tamin'izay fotoana izay ihany, nanamafy ilay lahatsoratra fa “manentana,manome aingam-panahy ary mampazoto ireo olona (mponina sy mpizahatany) ny zava-kanto eny an-dàlana, ary tena mila izany tokoa ny tanànantsika.”
Ny vahoaka Asháninka  no vondrona indizena be olona indrindra ao Amazôna Peroviana ary niharan'ny fifindra-monina an-katerena  nandritra ny fotoanan'ny fampihorohorona  tamin'ny taona 1980 sy 1990. Ao anatin'ireo izay tsy voavono, maro no napetraka tao amin'ny distrikan'i Ate ao Limà, izay ahitana vondrona kelin-dry zareo mbola miaina miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonin'ireo indizena hafa avy any amin'ireo faritra tanàla ao Però. Miaraka mikolokolo ny fifamatorany akaiky amin'ny tany sy ny voliny izy ireo.
Misy karazany maro ny mozika Asháninka, araka ny hanamarinin'ity hiran ‘i Yéssica Sánchez Comanti ity azy, nalaiko sary tany amin'ny fiantsàna tononkalo sy anganon'i Amazônia.
Na dia endrika novolena voalohany tao Limà sy tany amin'ireo tanàna amorontsiraka tamin'ny faran'ny taonjato faha-19 aza ny “valse” avy ao Però, izay nalaina tamin'ny “valse” avy ao Eoraopa , dia nahita ny làlany niditra tao amin'ny firenena izy taty aoriana. Ny “Contamanina“, izay avy amin'ny tanànan'i Contamana manamorona ny reniranon'i Ucayali any amin'ny faritra Avaratr'i “Loreto” dia toy ny Iquitos no mandrafitra azy, ny lehibe indrindra amin'ireo ‘voanjo’ napetraka ao Amazôna Peroviana— na fahafaharatsiny araka izay iheveran ‘i Manuel Acosta Ojeda, bilaogera, azy:
Betsaka ny dika natao ho an'ilay tononkira, fa ilay nataon'ny tarika Duo Loreto  no tena fata-daza. Tao anatin'ny firenireneko teto an-drenivohitra, naka sary, ny endrika vita tamin'ny zava-maneno fotsiny aho, izay mifanaraka amin'ny lohahevitr'ireo nifaneraseràko, izay notendren'i Ucayali, jamba iray mpitsoka “saxophone” eny an-dàlana ao afovoan'i Limà.
Tsy mbola zatra tsara ny mozika atao amin'ny tsofa  aho raha tsy nifankahita tamin'i Miguel Ángel, nefa raha azoko tamin'ny YouTube, dia fitaovana malaza any amin'ny faritra maro maneran-tany izy io.
Eto, mitendry ny hira Love Hurts  i Miguel Ángel, ilay hira “rock” mandrotsirotsy tamin'ny taona 70 izay tena nalaza tokoa, an'ny tarika Nazareth  avy any Ecosse, izay ny marina dia i Boudleaux Bryant  no nandrindra azy io ary nalaina feo voalohany indrindra tamin'ny taona 60, nataon'ny tarika Everly Brothers .
Ao anatin'ity lahatsary manaraka ity, sady mananihany no manazava fohifohy ny atao hoe mozika atao amin'ny tsofa i Miguel. Lahatsoratra hafa anaty bilaogy no  manome fanazavana sy ampahany amin'ilay fitaovana izay misy fotoana antsoina hoe “tsofa mihira” amin'ny teny Anglisy.
Talanjona noho ny feo navoakany aho raha vao naheno an'i Miles Davis  nitendry trompetra mitsentsina . Tsy mbola nieritreritra ny hifanena amin'ny olona iray mitendry trompetra mitsentsina aho eny amin'ny làlan'ny renivohitra, fa tamin'ity taona ity, navelan'ilay namako vaovao haka sary ity sehony manaraka ity aho. Anisan'ireo artista tsy manan-tsahala nifanena tamiko izy, izay nanambara fa nanana olana maro tamin'ireo manampahefana monisipaly amin'ny fandroahana azy eny amin'ny toerana sasany voatokana ho an'ny daholobe.
Maro ny endrika mozika hafa tendrena ho an'ny mpandalo ao Limà, ao anatin'izany ny fandikàna fanta-daza ny hiran'ny Tafika An-dranomasina ao Però  sy ny Lapan'ny Governemanta . Manomana karazana seho hampakàrana an-tsehatra ireo kalazan'ny rock  ihany koa ny tanànan'i Limà.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/09/25/64314/
 mpanakanto eny an-dàlana: http://en.wikipedia.org/wiki/Street_performance
 taxi-be sy kamiao: http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_in_Lima
 fifindra-monina an-katerena: http://www.peruthisweek.com/news-peru-begins-to-exhume-ashaninka-victims-of-shining-path-103209
 ny “valse” avy ao Però, izay nalaina tamin'ny “valse” avy ao Eoraopa: http://en.wikipedia.org/wiki/Vals_criollo
 mozika atao amin'ny tsofa: http://en.wikipedia.org/wiki/Musical_saw
 lahatsary manaraka : https://www.youtube.com/watch?v=I2NDI9JLTZM
 Lahatsoratra hafa anaty bilaogy no: http://instrumentario.blogspot.com/2011/03/instrumentos-insolitos-el-serrucho.html
 Tafika An-dranomasina ao Però: https://www.youtube.com/watch?v=K53_aXT6ZME
 Lapan'ny Governemanta: https://www.youtube.com/watch?v=aIfpba__DOw
 karazana seho hampakàrana an-tsehatra ireo kalazan'ny rock: https://www.youtube.com/watch?v=lxQQ2xJY3zU&list=UUu1dzlC6EBXn3PfBlzZTPeg